I-Realme iza kusungula iifowuni zayo eYurophu ngeli hlobo lehlobo | I-Androidsis
I-Realme ibhengeza ukufika kwayo eYurophu: okhuphisana naye omtsha weXiaomi?
I-Realme ilungiselela ukwanda kwayo kwilizwe liphela. Uhlobo, inkxaso ye-OPPO, ngoku ithengisa iifowuni zayo kwintengiso eIndiya. Nangona inkampani inezicwangciso zokuqala ukuthengisa kwiimarike ezintsha. Kule veki iphelileyo kutyhilwe ukuba inkampani iyazilungiselela yenza umtsi uye eChina kungekudala. Into ebhengeziweyo ngokwabo. Kodwa ayizukuphela kwentengiso apho bazokwazisa khona kwezi nyanga.
Umphathi omkhulu weRealme uqinisekisile ukuba banazo bazimisele nokwazisa ngeefowuni zabo eYurophu. Ukutsho kudliwanondlebe, nalapho athe wathi xa sele eqala ukuthengisa ezi fowuni. Umncintiswano omtsha uza kwiimveliso ezifana neXiaomi okanye iRedmi.
Uhlobo alwaziwa kakuhle kubathengi abaninzi. Nangona kwezi veki zidlulileyo sele besishiye neemodeli ezininzi zomdla, ezinje nge Realme 3 Pro o i-C2. Iimodeli ezimbini ezidibana kakuhle ngaphakathi kuluhlu lwazo, kwaye ezo zeza nexabiso elikhulu lemali, elibenza ukuba bakhethe okuhle kakhulu.
Njengoko i-CEO yenkampani isitsho kolu dliwanondlebe, ukufika kwakho eYurophu kusondele kakhulu. Kuba ubanga ukuba kuyakuba ngaphambi kokuphela kwesiqingatha sokuqala salo nyaka. Ke ngoko, yonke into ibonisa ukuba ngoJuni, iimodeli zokuqala zohlobo ziya kuqala ukwaziswa kwimarike yaseYurophu. Okwangoku, ayaziwa ukuba yeyiphi iifowuni ezikwikhathalogu yayo yokuqala ukufikelela ezivenkileni. Ngale ndlela, kufuneka silinde ukufumana okungakumbi.
Kukwakhankanyiwe ngakumbi malunga nesicwangciso sentengiso esiya kuthi silandelwe nguRealme xa besungula eYurophu. Uhlobo lwentengiso akananjongo zokutyikitya izivumelwano nabaqhubi. Ke singazithenga iifowuni zasimahla, ezivenkileni. Kubonakala ngathi kuqala baya kuqala ukuthengiswa kumajelo akwi-Intanethi kwaye emva koko baya kufikelela ezivenkileni. Nangona kungekho nto ithethwayo malunga nokuba ngawaphi amaphepha ewebhu okanye zeziphi iivenkile ezibonakalayo ziya kuba zezo sinokuthenga kuzo iifowuni zazo. Kodwa kulindeleke ukuba kungekudala kuzakubakho ulwazi malunga noku.
I-Realme izakuvula iivenkile zayo zokuqala kulo nyaka
Oku kuqaliswa eYurophu kwenza I-Realme inokuboniswa njengomntu okhuphisana naye kwiXiaomi. Uphawu lwaseTshayina luzenzele igama kwimarike, ngenxa yamaxabiso asezantsi. Ngokukodwa iimodeli zayo ezisezantsi neziphakathi zinokwamkelwa okuhle kwintengiso. Icandelo elifikelela kolu khuphiswano ngoku, ngokubheja okufanayo. Iimodeli zangoku, ngamaxabiso asezantsi kodwa iinkcukacha ezifanelekileyo. Ke idabi lisondela kweli candelo lentengiso. Nangona uXiaomi edlala ngenzuzo yokuba sele enobuso obumiselweyo, ukongeza ekubeni iivenkile ezininzi eSpain, nakwezinye iimarike zaseYurophu, ezinje ngeFrance, i-Italiya okanye iGrisi.
Kodwa kukho isiqwenga solwazi esinomdla kakhulu, ekwabelwana ngaso yi-CEO yenkampani. Kuba isitsho njalo I-40% yabasebenzisi bayo ngabantu abadlula kwifowuni yeXiaomi kwenye yeRealme. Inyani ekufuneka ithathelwe ingqalelo, kodwa ngandlela thile ibonisa ukuba abathengi babona ezi ntlobo zimbini njengeempawu ezifanayo. Oku kunokuba yinto eyenzekayo xa uphawu lusungulwa eYurophu.
Okwangoku ayaziwa ukuba zeziphi iimarike eYurophu eziza kusungulwa iifowuni zeRealme. ISpain ngokuqinisekileyo iya kuba yenye yezo marike. Ngokukodwa kuba sineempawu zaseTshayina ezinje ngeXiaomi esebenzayo kuyo, ebonakala ngathi yenye yeenjongo zenkampani. Ukuba ukumiliselwa kwabo kucwangcisiwe ngaphambi kokuphela kwesiqingatha sokuqala sonyaka, akufuneki kuthathe ixesha elide ukwazisa ngeenkcukacha ezithe kratya zokuba baya kuphehlelelwa eSpain. Siyathemba ukwazi okungakumbi malunga nokufika kwenkampani kungekudala. Ngaphandle kwamathandabuzo, inokubheja enomdla kweli candelo. Ucinga ntoni ngezicwangciso zabo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Realme ibhengeza ukufika kwayo eYurophu: okhuphisana naye omtsha weXiaomi?
Isamsung iya kusebenza kwinkonzo yayo yemidlalo yelifu
I-HTC ifuna ukubulala: iya kuvula i-smartphone entsha ngetekhnoloji ye-blockchain